DENI oo niyad-jab kala laabanaya Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
DENI oo niyad-jab kala laabanaya Muqdisho
Xasan Sheekh, waxaa la doortay 15-kii bishii hore, waxaana laga sugayaa inuu magaabo Ra’iisul Wasaaraha ka hor Arbacada, si uu u ilaaliyo qodob aan dastuurka ku qorneyn, hayeeshee noqday caado siyaasadeed muddo dher soo jiray.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa maanta ku laabanaya magaalada Garowe ee xarunta Maamulkaas, kadib markii uu xaqiiqsaday in aysan u suura-gali doonin labo u jeeddo oo ku wajahneyd magacaabidda Ra’iisul Wasaaraha 21-aad ee dalka, kaasoo la filayo in saacadaha soo aaddan lagu dhawaaqo.
Deni, wuxuu rumeysnaa inuu si fudud ku heli karo shaqsi ahaan kursiga Ra’iisul Wasaaraha, waxaana saaxiibbo aad ugu dhow laga soo wariyyay inuu kadib doorashadii 15-kii May 2022, isku diyaariyay xilka Wasiirka 1-aad ee Xukuumadda Cusub, hayeeshee MW Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa qorshahaas wax kama jiraan ka soo qaaday.
Deni, wuxuu sidoo kale, doonayay haddii uu isagu heli waayo xilkaas inuu Xasan Sheekh cadaadis ku saaro shaqsi uu isagu daaha gadaashiisa ka maamulo oo ka dhex yimaada kooxda Aaran-jaan ee Cabdiraxmaan Faroole geed-fadhiga u yahay, hayeeshee damacas wuxuu sababay in Garowe hadda qarka u saaran tahay in ay weyso xilka RW-ha.
Ilo loo qaateen ah, ayaa warinaya in sanadkaan Ra’iisul Wasaaruhu ka imaan karo dhanka magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubbaland, isla-markaana uu hoggaamiyaha Maamulkaas Axmed Madoobe, Siciid Deni, kaga adkaaday loollanka beelaha Daarood ugu jiraan xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya 2022-2026.
Dhanka kale, xogaha ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in haddii Madaxweyne Xasan uu shaqsi ka soo jeeda Puntland uu u magacaabayo xilkaas, uu noqon doono mid ka yimaada gudaha kooxdiisa siyaasadda, gaar ahaan xisbigiisa UPD, iyadoo u jeedku yahay inuu ka fogaado Ra’iisul Wasaare majaraha loo hayo.
Sida caadiga ah sanadihii la soo dhaafay haddii Madaxweynuhu ka yimaado Muqdisho, waxaa Ra’iisul Wasaaraha laga dhigi jiray shaqsi ka soo jeeda GAROWE ama GEDO, hayeeshee, waxaa hadda si weyn u xooggan, xogo sheegaya in Xasan Sheekh, uu markii ugu horreysay xilka Ra’iisul Wasaaha sii doono beesha Ogaadeen.
Siciid Deni, wuxuu ku guuldareystay inuu helo kursiga Madaxweynaha Soomaaliya doorashadii 15-kii May, wuxuu ku fashilmay in loo magacaabo Ra’iisul Wasaaraha waddanka, wuxuu ku hungoobay in shaqsi uu wato loo dhiibo xilkaas, wuxuuna qarka u saaran yahay in sabab uu isagu leeyahay xilkaas ugu wareego Kismaayo.